Ciidan bilays iyo turbataariyo iskugu jira oo maanta lagu wareejiyey fariisimadii Garsoor; Afhayeenka baarlamaanka Puntland iyo wasiirro goobjoog ka ahaa. – Radio Daljir
Galkacyo, Oct 20 ? Waxaa maanta koontaraalka koonfureed iyo saldhiggii bilayska ee warshad Gellay ee magaalada Galkacyo si rasmi ah loogu wareejiyey ciidan iskugu jira bilays iyo turba-taariyo, iyadoo dhinaca kalena malleyshiyaadkii halkaasi joogay loo qaadayo tababarro aqoon kordhineed oo qayb ka ah qaramayntooda.
Munaasabadda lagu maamuusayey rasmi ula wareegidda fariisimadaasi ciidan ee xaafadda Garsoor, waxaa ka qaybgalay mas?uuliyiin sarsare oo ka tirsan dawladda Puntland oo uu ka mid ahaa guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi, wasiirrada caddaaladda, shaqada iyo shaqaalaha, hawlaha guud iyo mas?uuliyiin heer gobol ah oo ka tirsan maamulka gobolka Mudug.
Dhammaystirka qorshahaan la-wareegid ee maanta, ayaa qayb ka ahaa tallaabo qaadid kooban oo horay mas?uuliyiin heer gobol ahi ay u sameeyeen Jimcihii aynu soo dhaafnay kaddib markii ay sheegeen fariisimadaasi in lagu wareejiyey iyana ay u sii dhiibeen tiro-kooban oo ciidanka deegaanka ah kuwaasi oo loo qoondaynayey in lagu biirinayo ciidanka amniga ee Puntland taasoo xubin ka ahayd heshiidkii xalka looga gaarayey xurguftii Garsoor.
Wasiirka caddaalladda ee dawladda Puntland Cabdikhaliif Ajaayo, oo ka mid ah mas?uuliyeen dawladda ee wareejintaasi ka qaybgalay oo u waramay Radio Daljir markii ay soo gabagabeeyeen qorshahaasi ayaa sheegay in ay dhammaystireen wixii qabyada ka ahaa hirgalinta is-fahamkii laga gaaray rabshaddii ka dhacday Garsoor.
Wasiirku, waxaa uu sheegay in ay harsan yihiin oo kaliya arrimo dhawr ah oo aad u sahlan kuwaasi oo sida wasiirku caddeeyey lagu dhammaystiri doono magaalada Garowe ee xarunta dawladda Puntland.
Dhawrkii maalmood ee ugu dambeeyey magaalada Galkacyo waxaa ku sugnaa wafti uu hoggaaminayey guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Mudane Cabdirashiid Maxamed Xirsi kaasoo iskugu jiray golayaasha dawladda si ay u sii horumariyaan hirgalinta heshiiskii Garsoor.